Ejipta: Fahatakonan’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Fahatakonan'ny aterineto
Voadika ny 01 Febroary 2011 3:51 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, 日本語, 한국어, Français, عربي, polski, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Ampahany amin'ny fandrakofana manokan'ireo Fanoherana Ejypta 2011 ity lahatsoratra ity.
Nandritra ireo andro vitsy lasa, satria nampiasa ireo fitaovan'ny media sosialy ireo Ejyptiana mba hikarakaran'izy ireo sy hanapariahany vaovao, nisy ihany koa ireo sakantsakana maro nianjady taminy: Ny 25 Janoary, voatatitra fa voasakana ny Twitter, narahin'ny Facebook ny andro manaraka. Ny 27, dia nitsitaitaika ny fahafahana miditra amin'ireo vohikala rehetra.
Teo amin'ny manodidina tamin'ny 1 ora maraina tany Kairo ny Zoma, 28 Janoary–andron'ireo fihetsiketsehana efa voaomana hatao–nanomboka niditra ireo tatitra fa hoe nanjary tsy afaka nidiran'ireo Ejyptiana tany Kairo sy Alexandria ny aterineto. Minitra vitsy taorian'izay, nitoraka tweet i @iman_said:
Eny, manamarina ny CNN fa tapaka ny aterineto manerana an'i Ejypta. Takona tanteraka i Ejypta amin'izao #jan25 #egypt #SHAME
Fotoana fohy avy eo, nampitandrina i Alaa Abd El Fattah (@alaa), Ejyptiana mipetraka any Afrika Atsimo:
Tokony hivonona amin'ny fahatapahan'ny finday eraky ny tanàna ihany koa isika rahampitso (na fara-faharatsiny eo amin'ny faritry ny fihetsiketsehana) #Jan25
Jacob Appelbaum (@ioerror), Amerikanina nitatitra fanivanana aterineto tany Ejypta, nanamafy ny fisakanana saiky manontolo, ka miteny:
Toa azo lazaina fa i Ejipta manontolo mihitsy no tsy misy fifandraisana – toy ny tambajotra SS7 azy ireo ihany no mandeha. #jan25 #egypt
Ireo izay nikezaka niantso namana sy fianakaviana tany Ejypta dia naneho ny fisavoritahan-tsainy sy ny ahiahiny tao amin'ny Twitter. @alaa dia manazava:
mbola mandeha ny finday aty ejypta, izany no mbola mahatafajanona ahy eto, saingy tsy tomombana ireo serasera any amin'ny faritra sasany
Ny fijery avy any Etazonia kosa dia toa mamporisika; fihetsika mahaliana, Alec Ross (@alecjross), Mpanolotsaina Voalohany amin'ny Fanavaozana ny Mpitantsoratry ny Fanjakana Hillary Clinton, dia nitoraka tweet tamin'ny teny Arabo:
Miantso ireo manam-pahefana Ejiptiana izahay mba hamela ny fihetsiketsehana am-pilaminana, ary miantso azy ireo mba hifehy tena ka tsy hitsabatsabaka hanelingelina ny fitaovan-tserasera sosialy.
Na dia eo aza ny sakana, dia hita fa misy ireo Ejyptiana sasany afaka mitoraka tweet ao anatin'ny fanantenana hanome vaovao ny any ivelan'ny firenena. Ivelan'ity fahatapahana ity, hiezaka hitatitra avy amin'ny antso an-telefaona sy fifaneraserana hafa ny Global Voices mandritra ireo andro vitsy ho avy.